Marwa waa gabar cashar siisay dadka niyadda ka jabay | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada Marwa waa gabar cashar siisay dadka niyadda ka jabay
Marwa waa gabar cashar siisay dadka niyadda ka jabay
Monday, February 12, 2018 Bulshada
Bulsha:- wiigan dhex diisa uun bey ahayd markii ay arragtey iyadoo la sharxey, lana qurxiyay dariiqaa si luugu qabto tartan maaradoona oo caruurta luugu qabanayo.
Marwa waxa ay go”aan ku gaadhey iney ka qayb qaadato tartankaa, waxeyna toos ugu tagtey hawlwadeenadii qabanqaabinayay hawshan, iyadoo ka codsatay iney ka qayb gasho tartankan.
Nasiib wanaag waa la ogolaadey, waxeyna ka qayb gashey tartankii iyadoo cagaagan isla markaana sidata dharkeedi caadiga ahaa sida xijaabkeda.
waxa yaabka ku noqdey hawl-wadeenadii ayaa ah iney marwa kaalinta koowaad ku guuleystay iyadoo ka guuleystay caruur loo soo diyaariyay si weyn isla markaana xidhan kabihii orodka iyo maryihii orodkaba.
Marwa waxa ay soo jiidatay guusheedu dadweynaha dalka masar taas oo keentay in dad fara badan ugu baqeen in marwa lagu darro caruurta athletikada masar, isla markaana la kafaalo qaado nolasheeda oo dhan.
Marwa yar ayaa sheegtay iney eryato mararka qaar macaamiisha ka iiibsneysa tishiiyuuga ee gawaadhida wadata si ay uga iibiso af mariskan yar ama tishiiyuugan.
Halkaa waxa inooga soo baxeysa nolasheeda adagi iney u ahayd tababar dabiiciya!
Socodkaaga iyo shaqadaada adagi mararka qaar waxa ay kuu yeesha adeyg aad u aayi doonto mar danbe ! noqo marwa oo kale!
W/Q : Dr Abdulkareem Ali Boltuur